निर्वाचित भएलगत्तै लम्किँदै ओलीलाई भेट्न पुगे सभामुख अग्नि सापकोटा
प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणालगत्तै अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नमस्कार गर्न त्यसतर्फ लम्किए ।
सभामुख निर्वाचनको दिन आइतवार सापकोटा सत्तापक्षीय पंक्तिको अघिल्लो सीटमा बसेका थिए । बैठकको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नासाथ उनी पार्टी अध्यक्षको बधाई थाप्न लम्किएका थिए ।
सीटबाट उठ्ने बित्तिकै पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले खादा लगाउन भ्याइहालिन् । बीच बाटोमै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सापकोटालाई सभामुख बनाउने प्रस्तावका प्रस्तावक सुवास नेम्वाङ र सांसद खगराज अधिकारीले बधाई दिन भ्याए ।
बीचमा अरू सांसद पनि आएर खादा लगाउन र बधाई दिन खोज्दै थिए त्यहाँबाट उम्किए छिटोछिटो लम्किँदै सापकोटा प्रधानमन्त्री ओली भएको ठाउँमा पुगे । नमस्कार आदान–प्रदान भयो ।
स्वास्थ्य समस्यका कारण ओलिले हात मिलाउँदैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको बधाई थापेपछि उनी प्रतिपक्षीको रोतर्फ अघि बढे । अघिल्लो पंक्तिका सांसदहरूसँग हात मिलाउँदै अघि बढेका सापकोटाले बैठक कक्षको ढोकैमा पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेटे ।
भट्टराईलाई भेटिसकेपछि मात्र सापकोटा अन्य सांसदको बधाई थाप्न फर्किएका थिए । सल्यानबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर बस्नेतले निकै मेहेनतपछि मात्र खदा लगाइदिन पाए ।
त्यसपछि अमृता थापा लगायत पूर्व माओवादी खेमाका सांसदहरूले सापकोटासँग सेल्फी लिए । संसद्को वेलमा उपसभामुखबाट राजीनामा गरेकी डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे र नेकपा सांसद विन्दा पाण्डेले ‘पुरुष’ सांसदलाई सभामुख बनाएकोमा ठट्टा गर्दै बधाइ दिए ।
नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटालाई बधाई दिन मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठक राखिएको छ ।
मूर्तरूप नलिँदै नेकपा कार्यदल विवादमा, कोटेश्वर र ...